कुचोबारे जान्नुहोस् जानकारी! – Click Khabar
कुचोबारे जान्नुहोस् जानकारी!
सोमबार, कार्तिक २९, २०७८ | ११:२१:२२ |
कुचोलाई लक्ष्मीको प्रतिक मानिन्छ। त्यसैले झाडुसँग जोडिएका गुण र अपगुणले हाम्रो जीवनमा ठूलो असर पार्दछ।यदी कुचोसँग जोडिएका केही कुराको ध्यान नराख्यो भने हाम्रो जीवनमा समस्या थपिन सक्छ। त्यसैले वास्तुशास्त्रका अनुसार कुचो सम्बन्धी यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्ःघर वा अफिसमा कुचोको काम सकियो भने त्यसलाई देखिरहने ठाउँमा नराख्नुहोस्। पुरै समय कुचो देखिरहनु अशुभ मानिन्छ।कयौँ पटक कुचो भाँचिदा पनि हामी त्यसको प्रयोग गछौँ। त्यो एकदमै गलत हो। यदी घर वा अफिसमा कुचो झाँचियो वा टुट्फुट भएमा त्यसलाई तुरुन्त परिवर्तन गर्नुहोस्।
यदी मिल्यो भने झाडुलाई पश्चिम दिशाको कुनै कोठामा राख्नुहोस्। यस दिशामा कुचो राख्नु निकै राम्रो मानिन्छ। जसले गर्दा कुचोका कारण तपाईको घरमा कुनै नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्दैन्।वेलुकीको समयमा कुचो लगाउनु वास्तुशास्त्रका अनुसार अशुभ मानिन्छ। वेलुकी कुचो लगाउदा लक्ष्मी बाहिरीने विश्वास भएकाले रात वा वेलुकीको समयमा कुचो नलगाउनुहोस्।कुचो लाई कहिलै पनि ठाडो बनाएर नराख्नुहोस्। ठाडो कतै कुचो त बनी रहेको छैन तपाईको गरीबीको कारण ? ध्यान दिनुहोस् यी कुरा
झाडुलाई लक्ष्मीको प्रतिक मानिन्छ। त्यसैले झाडुसँग जोडिएका गुण र अपगुणले हाम्रो जीवनमा ठूलो असर पार्दछ।यदी कुचोसँग जोडिएका केही कुराको ध्यान नराख्यो भने हाम्रो जीवनमा समस्या थपिन सक्छ। त्यसैले वास्तुशास्त्रका अनुसार कुचो सम्बन्धी यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्ःघर वा अफिसमा कुचो को काम सकियो भने त्यसलाई देखिरहने ठाउँमा नराख्नुहोस्। पुरै समय कुचो देखिरहनु अशुभ मानिन्छ।कयौँ पटक कुचो भाँचिदा पनि हामी त्यसको प्रयोग गछौँ। त्यो एकदमै गलत हो। यदी घर वा अफिसमा कुचो झाँचियो वा टुट्फुट भएमा त्यसलाई तुरुन्त परिवर्तन गर्नुहोस्।
यदी मिल्यो भने झाडुलाई पश्चिम दिशाको कुनै कोठामा राख्नुहोस्। यस दिशामा कुचो राख्नु निकै राम्रो मानिन्छ। जसले गर्दा कुचोका कारण तपाईको घरमा कुनै नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्दैन्।वेलुकीको समयमा कुचो लगाउनु वास्तुशास्त्रका अनुसार अशुभ मानिन्छ। वेलुकी कुचो लगाउदा लक्ष्मी बाहिरीने विश्वास भएकाले रात वा वेलुकीको समयमा कुचो नलगाउनुहोस्।कुचोलाई कहिलै पनि ठाडो बनाएर नराख्नुहोस्। ठाडो कुचो अपशगुनको कारण मानिने भएकाले जहिले पनि यसलाई जमिनमा लडाएर राख्ने गर्नुहोस्।
पुरानो झाडु बदलेर नयाँ झाडु ल्याउन लाग्नु भएको छ भने शनिबार मात्र यो काम गर्नु राम्रो मानिन्छ। त्यस्तै झाडुलाई लक्ष्मीको प्रतिक मानिने भएकाले कहिलै पनि खुट्टामा झाडुले नछुनु राम्रो हुन्छ।अपशगुनको कारण मानिने भएकाले जहिले पनि यसलाई जमिनमा लडाएर राख्ने गर्नुहोस्।पुरानो कुचो बदलेर नयाँ कुचो ल्याउन लाग्नु भएको छ भने शनिबार मात्र यो काम गर्नु राम्रो मानिन्छ। त्यस्तै झाडुलाई लक्ष्मीको प्रतिक मानिने भएकाले कहिलै पनि कुचो खुट्टाले नछुनु राम्रो हुँदैन ।
“आर्थिक पुनरुद्धारलाई अगाडि बढाउन सरकार तयार” : प्रधानमन्त्री देउवा
रेलचढेर विवाहपञ्चमी मेला हेर्न जाने महोत्तरीवासीवासीको रहर अधुरै